Sonos wuxuu ku dhawaaqay dogobka Jiilka Labaad, Qiimaha Lacagta Guusha | Wararka Gadget
Sonos wuxuu ku dhawaaqayaa Beam-jiilka labaad, oo ah qiime lacageed
Shirkadda Waqooyiga Ameerika Sonos Waxay si joogto ah noogu reebtaa isku -duubni ku hadlayaal caqli badan oo loogu talagalay dhammaan guryaha iyo badallo badan. Halkan Actualidad Gadget waxaan ku falanqeynaa waqtiga Sonos Beam asal ahaan, iyo sidoo kale kii ku xigay ee ugu sarreeya, the Sonos Arc, sanduuqa dhawaaqa ugu fiican guriga aad iibsan karto.
Waqtigan Sonos wuxuu ku dhawaaqayaa cusboonaysiinta Sonos Beam, barkeeda sanqadha ee telefishannada leh isku xirnaanta caqliga leh iyo kaaliyaha dalwaddii. Nala soo hel Sonos Beam -kan cusub oo aan dhowaan ku falanqayn doonno Gadget News si aan si faahfaahsan kuugu sheegno waxa cusboonaysiinta qalabka ka kooban yahay.
Isbeddelkii ugu horreeyay ee weyn ee jiilkan labaad Sonos Beam waxaa cad inay qaadanayso naqshadaynta wax -soo -saarka polycarbonate -ka, sidaasna looga tago mid ka mid ah badeecadaha kaliya ee ku haray dahaarka dharka. Sida iska cad, midabada dhaqanka madow iyo caddaanka ah ee sumadda ayaa wali la ilaaliyaa, iyo sidoo kale xakamaynta taabashada farriimaha badan ee qaybta sare oo ay weheliso tilmaanta LED ee kaaliyaha dalwaddii, Alexa ama Google Home kiiskeeda. Marka la eego naqshadeynta iyo cabbirka, jiilkan labaad ee Sonos Beam ayaa weli ah mid aan caqli -gal ahayn, xagga hore wuxuu si fudud u noqonayaa nidaam adag oo leh daloollo, sida ay horeyba uga dhacday Sonos Arc ama Sonos One.
Waxay sidoo kale leedahay Apple AirPlay 2 oo leh is dhexgalka HomeKit, isku -duwidda kontoroolka fog ee telefishinka si aad awood ugu yeelatid inaad si fudud ugu maamusho hal koontarool oo fog iyada oo loo marayo dareeraha infrared -ka, iyo sidoo kale boodka HDMI eARC oo u oggolaanaya is -dhexgalka guud ee telefishanka iyo tayada codka ugu sarreeya. Soo -saaraha cusub ee Sonos Arc 2 ayaa 40% ka dhakhso badan wuxuuna ujeedkiisu yahay inuu bixiyo dhawaaq ku wareegsan dalwaddii iyo sidoo kale Dolby Atmos oo leh saamayn 3D, kaas oo la jaanqaadi doona saxnaanta laga helay Turueplay.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Noticias » Sonos wuxuu ku dhawaaqayaa Beam-jiilka labaad, oo ah qiime lacageed
Waa maxay software -ka maareynta makhaayadda ugu weyn?
IPhone 13 iyo wax kasta oo Apple ku soo bandhigtay Keynote